भैरहवा नाकामा भारतीय अवरोध
लक्ष्मण पोखरेल बिहीबार, साउन २६, २०७४ 2115 पटक पढिएको
भारत प्रवेशका लागि भैरहवामा लामबद्ध ट्रक ।अन्नपूर्ण
सुरक्षाका नाममा दुःख दिने नियत : व्यवसायी
बुटवल : सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतीय पक्षको कडाइले मुलुककै दोस्रो ठूलो भन्सार बेलहिया (भैरहवा) नाका करिब महिना दिनदेखि प्रभावित भएको छ । नेपालबाट निकासी हुने मालवाहक र रित्ता गाडीलाई जाँचको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले निरन्तर ‘अवरोध' गरिरहेका छन् । नेपालमा स्थानीय चुनाव भएदेखि प्रभावित भन्सार नाका अझै सहज हुन सकेको छैन । दुई देशबीच कूटनीतिक छलफल भइरहेको बताइए पनि भन्सारबाट आयातनिर्यातको अवरोध उस्तै छ ।
आयातमाभन्दा सामान लोड गर्न जाने गाडी निकास हुन नपाएको बेलहिया भन्सार कार्यालयका प्रमुख भुपालराज शाक्यले बताए । ‘चुनावले भन्सार प्रभावित भयो, त्यसपछि भारतमा जीएसटी लागू हुँदा सामान आयात हुन सकेन', उनले भने, ‘अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीको जाँचले प्रभावित छ ।'
साउनमा ५ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्सारमा मंगलबारसम्म ३ अर्ब ९० करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । मासिक करिब ३३ करोड निर्यात हुने भए पनि यो महिना त्यो प्रभावित हुने निश्चित छ । बेलहिया भन्सारमा संकलन हुने राजस्वमध्ये दुई प्रतिशत मात्रै निर्यातको हो ।
भारतीय भन्सार अधिकारीले भने आफूहरूतर्फ कुनै समस्या नरहेको र निर्बाध रूपमा गाडी पठाइरहेको बताएका छन् । तर सुरक्षाकर्मीले निकै लामो जाँच गरेका छन् । पटकपटक समकक्षीसँग कुराकानी गरिरहेको र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले बताए । तर समस्या समाधान भने नभएको उनको भनाइ छ ।
भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा आपराधिक घटना हुन नदिन सुरक्षा कडा पारिएको भारतीय सुरक्षा निकायको स्पष्टोक्ति छ । एक साता अघिसम्म चिनियाँ तथा पाकिस्तानी नागरिक भारत पस्न सक्ने भन्दै कडाइ गरिएको जाँचमा खटिने सुरक्षाकर्मीले बताउँदै आएका थिए ।
नेपालबाट निकासी हुने मालवाहक र रित्ता गाडीलाई जाँचको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले निरन्तर ‘अवरोध' गरिरहेका छन् ।
यो भारतको दुःख दिने नियत मात्रै रहेको भन्सार एजेन्ट संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शान्तकुमार शर्माले बताए । ‘सुरक्षाका लागि मात्रै हो भने रूपन्देहीकै अन्य सीमामा किन कडाइ भएन ? ', उनले प्रश्न गरे, ‘नाकाबन्दीकै रूपमा नेपाललाई दुःख दिने नियत भारतको हो ।' यसको समाधान दुई देशका प्रमुखबीचबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बेलहिया मधेस आन्दोलनको समयमा नाकाबन्दी हुँदासमेत आयातका लागि केही खुला भएको नाका हो । अहिले त्यही नाका मात्रै अवरोध हुनुलाई व्यवसायीले फरक चलखेल रहेको आशंका गरेका छन् । बेलहिया नाकामा निरन्तर अवरोध भएपछि केही आयातकर्ताले कृष्णनगर नाकाबाट सामान भित्र्याएका छन् । बेलहिया नाकाबाट दैनिक औसतमा चार सय मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिँदै आएका थिए । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत गोपालप्रसाद भट्टराईले दुई÷अढाई सयको हाराहारीमा मात्रै गाडी भित्रिएको बताए ।
नेपालबाट भारत पस्ने गाडीको लामो लाइन यथावत् छ । नेपालतर्फ झन्डै चार किलोमिटरमा तीन लाइनमा गाडी रोकिएका छन् । त्यसरी रोकिनेमा अधिकांश भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नै छन् । गाडीले प्रवेश नपाएपछि भारतीय गाडीका चालक आक्रोशित छन् । ‘रासन सकियो, कहिले जाने ठेगान छैन', एक भारतीय चालकले भने । भारतीय चालकले शौचालय गर्नसमेत नपाउँदा समस्यामा परेको बताएका छन् । बेलहिया हुँदै भारत प्रवेश नपाएका गाडी नवलपरासीको महेशपुर नाका हुँदै जाने गरेका छन् । महेशपुरबाट भारतको ठुठीबारी प्रवेशका लागि सयौं गाडी लाइन लागेका छन् ।
नाका अवरोध भएपछि सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ भारतीय एरिया सुरक्षा अधिकारीसँग डेलिगेसन गएको छ । संघले बुधबार सुनौलीका एसएसबी शिव दयालसँग अवरोधका विषयमा जानकारी गराएको छ ।
टोलीसँगको भेटमा दयालले भारतीय स्वतन्त्रता दिवस आएकाले केही जाँच बढाएको प्रतिक्रिया दिएको सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका भन्सार एजेनट संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शर्माले बताए । भेटमा दयालले गाडीको भीडभाड छिट्टै समाधान हुने बताएको उनको भनाइ छ।
सोमवार, कात्तिक ६, २०७४ विदेश घुम्ने नेपाली बढे
आइतवार, कात्तिक ५, २०७४ भक्तपुर मिनिबसको अध्यक्षमा प्रधान
कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै 5823
'हेबीवेट' नेताका प्रतिस्पर्धी हेबीवेट नै 29584
पौडी खेल्ने क्रममा खोलामा डुबेर मृत्यु 315
२० हजार घुससहित तीन नासु पक्राउ 4468
सुदूर पहाडमा जात्राको आकर्षण 441
'फेसनका नाममा च्यातिएका कपडा लगाउनु अशुभ' 6973